N'ogbe Freight Freight Manufacturer and Supplier | N'oge
Fregbọ njem ụgbọelu si China - Airgbọ Ala Kachasị Internationalgbọ Ala nke Mba Karịa Echiche Chetara Mkpakọrịta bụ okwu ejirila eme ihe, mana ọ na-aga ụfọdụ ụzọ iji kọwaa ọrụ ndị ahịa anyị lekwasịrị anya. Anyị ...
Ibu Ikuku Mbupu Site na China - Ugbo Ala Kachasị Karịa Mba
Na-atụgharị uche ọnụ
Mmekọrịta bụ okwu ejiri mee ihe, mana ọ na-aga ụfọdụ ụzọ na-akọwa ọrụ ndị ahịa anyị lekwasịrị anya. Anyị na-agbasi mbọ ike ime ka mmekọrịta gị karịa ihe ị ga-eme ka ndị ahịa gị gafee ụwa.
International ibuebugharị bụ mgbe a guzozie omume n'etiti oge, na-eri na gburugburu ebe obibi nchegbu. Nke ahụ bụ otu ihe kpatara ụlọ ọrụ na-ahọrọ GZ Ontime maka ọnụ ahịa dị mma, nnyefe dị mfe nke ibu ha. Dị ka ha, ị ga-enwe obi ike na njikọ aka anyị gbakwunyere gburugburu ụwa na-enye gị ohere ịhọrọ site n'ọtụtụ ikuku na oke osimiriibuọrụ nhọrọ. Seamlessly ahaziri gị kpọmkwem mkpa, zuru ezu na njedebe na-ọgwụgwụ visibiliti.
Anyị na-enye ọrụ nnweta ụgbọ elu si China na mba ndị ọzọ, ma ọ bụ anyị nwere ike inyere gị aka ibubata na China. Maka Ibu ikuku na Europe, dịka ọmụmaatụ, oge nnyefe ikuku ụgbọ elu ruru ụbọchị 7, nke dị ngwa karịa ụbọchị 35/40 na-adịkarị site na ibu mmiri.
Netwọk anyị nke ndị mmekọ ọkachamara a nwalere nke ọma na-enye anyị ohere ijikwa mbupu gị nke ọma na igbu oge kachasị mma.
Ugbo elu ikuku nwere ike ime maka ụdị ngwaahịa ọ bụla, site na nke kachasị njọ na nke kachasị njọ.
Usoro iwu ikuku siri ike, ọ bụ ya mere anyị ji etinye uche anyị iji nyochaa arịrịọ gị n'ụzọ zuru oke. Mgbe ndị a kpọmkwem nyochara gị ina, anyị ìgwè ga-amụma mkpuchi gị a ibu ọrụ kenha kpam na gị na-atụ anya, gị mkpa na ọdịdị nke gị ngwongwo.
Shippinggbọ njem ụgbọelu mba ụwa nwere ike ịbụ usoro gbagwojuru anya, yana nchịkwa, ụkpụrụ na ịchọta ọnụahịa akụ na ụba na ịgbaga iji lụọ ọgụ. Anyị ghọtara etu nsogbu a nwere ike ịbụ, yabụ ka anyị mee ka nke gị dị mfelọjistik maka gị.
Ndị otu anyị nwere ahụmahụ nwere ike inye aka n'akụkụ ọ bụla nke usoro mbupu. Yabụ, ịkwesighi ịtụ ụjọ ka anyị na-emesi ntụkwasị obi na ọrụ na-enweghị nsogbu ike.
Mgbe ị na-ahọrọ anyị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọrọ karịa gburugburu ọrụ ikuku, anyị ga-agafe karịa iji hazie nnyefe zuru oke. Anyị na-eme nke ọ bụla iji mee nke gị dumnjem Ahụmahụ iji mezuo atụmanya gị.
1.Agbọelu na ọdụ ụgbọ elu, n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ, n'ọnụ ụzọ gaa n'ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu ruo n'ọnụ ụzọ
2.DDP (Elikwụ utygwọ Ọrụ Pagwọ), DDU (Akwụghị utygwọ Ọrụ)
3. Ndozi omenala
4.Inland njem ndokwa
5. Cargo mkpuchi
6.Ngota Mbupu nsuso
7.Safe mbukota na crating
GZ Ontime ga-enwe obi ụtọ mgbe niile inye gị ahụmịhe anyị na mbufe n'etiti China na ụwa maka mkpa gị na Freight Freight.
Nke gara aga: Ibu Oké Osimiri
DDP ụgbọ ibu
Mbupu ụgbọelu DDP
DDP site na ikuku